UBenjamin Carson, udokotela ohlinzayo odume umhlaba wonke - i-Afrikhepri Fondation
UBenjamin Carson, udokotela ohlinzayo odumile emhlabeni
BU-Enjamin Carson wazalelwa eDetroit, eMexico ngoSepthemba 18, 1951. Unina uSonya, (ovela emndenini wezingane eziyi-13), ozobamba iqhaza ekuphumeleleni kwakhe, umisa isikole ekolishi futhi uzithola eseshade eneminyaka eyi-13. Uhlukanisa lapho uBen Carson eneminyaka eyi-8. Ukhulisa abafana bakhe ababili, uBen nomfowabo, ngokuthola imali yokuziphilisa ngemisebenzi ehlukahlukene engajwayelekile: kwesinye isikhathi uhola amabili noma amathathu ngokufana.
UBenjamin nomfowabo banezinkinga ezithile esikoleni. Kwesibili, uBenjamini umane ungomunye wabokugcina abasekilasini lakhe. Abalingani afunda nabo bahlekisa ngaye bambiza ngokuthi “dummy”, okumenza angathandeki. Uphazamisa izifundo ngokwenza amahlaya futhi ungumfundi othize onzima.
Lapho uNkk Carson eqaphela ukuthi amamaki endodana yakhe ancipha, unquma ukuthatha izinto ngokwakhe: “UBenjamin uhlakaniphe kakhulu ukuba namamaki anje” uyamtshela. Ngemuva kwalokho unquma ukunciphisa kakhulu ukusetshenziswa kwezingane kuthelevishini. Kuyabavimbela nokuphuma ngaphandle bayozijabulisa kuze kube yilapho beqeda umsebenzi wabo wesikole zonke izinsuku zesikole.
Ubadinga ukuthi bafunde izincwadi ezimbili ngeviki ababolekwe zona kumtapo wezincwadi futhi babike kuye (yize ethi naye ngokwakhe akafundile, njengoba eye washiya isikole kusenesikhathi). Emavikini ambalwa, uBenjamin umangaza abafundi afunda nabo (ekhomba isibonelo ngencwadi ukuthi ufunde isampula yamatshe omunye wothisha bakhe abalethe ekilasini). "Kungaleso sikhathi lapho ngabona khona ukuthi angisiyena isiphukuphuku," kusho ngokuhamba kwesikhathi.
Esikhathini sonyaka, uphakathi kwabokuqala ekilasini. Uyaneliswa ukwazi nokuqeda zonke izincwadi eziwela ngaphansi kwesandla sakhe. Unikwa isifundo seYunivesithi lapho ephothula khona i-BA in Psychology. Wabe esejoyina iSikole Sezokwelapha eNyuvesi yaseMichigan futhi wanquma ekugcineni athuthele ekudleni kwamakhamzimba.
Ukuxhumana okuhle kakhulu phakathi kwamehlo nezandla zakhe kanye namandla amakhulu obuhlakani kumenza abe yi-neurosurgeon enhle kakhulu. Ngemuva kwesikole sezokwelapha, wajoyina isibhedlela esidumile saseJohn Hopkins eBaltimore. Uneminyaka engama-33 nje kuphela ubudala, waba ngumqondisi woMnyango Wezokuhlinza Ngezingane esibhedlela.
Ngo-1987, uBenjamin Carson wazuza umhlaba okokuqala ngokusebenzisa ngempumelelo umsebenzi wokuhlukanisa amawele ama-Siamese amaJalimane ayexhunyaniswe ngabodwa ngaphansi kwamakhanda kusukela azalwa. Ukuhlinzwa kweSiamese okuxhunyaniswe yinhloko kuyingozi enkulu (kuyadingeka ukwakha kabusha lonke uhlelo lwemithambo yegazi olwabiwe ngamaSiamese amabili). Bebelokhu begcina ngaphambi kokushona kwamawele noma amabili. UCarson nethimba lakhe (abantu abangama-70) basebenze amahora angama-22 alandelanayo, bekwazi ukuhlukanisa amawele amabili amaSiamese kungabikho noyedwa kuwo ofayo. Ngesikhathi sokuhlinzwa, ukwehliswa ngokuzithandela kokushisa komzimba kuhlanganiswe nokuphanjaniswa kokujikeleza kwegazi kanye nokuboshwa kwenhliziyo okwenziwa ngokuzithandela yiqembu lezokwelapha ngezidingo zokuhlinzwa.
Ngemva kwalokho, wenza ezinye izinto eziningana zokuhlukana kweSiamese ezixhunywe yinhloko:
Ngo-1994, ukuhlulwa kokuhlukanisa uSiamese wezinyanga eziyisikhombisa, kuxhunyaniswe ngamakhanda abo. Babulawa yizinkinga zokuhlinzwa ngenxa yokuthi babelana ngemisebenzi ebalulekile enhliziyweni nasezinso.
Ngo-1997, kwahlinzwa iSiamese yaseZambia enezinyanga eziyi-11 neqembu labantu abangama-50. Amawele lawo axhunyaniswe yinhloko, kepha amakhanda abo ayehlangene. La mawele amabili okwamanje ahlala eZambia.
Ngo-2003, uBenjamin Carson wayeyingxenye yeqembu lamanye amazwe elalihlangene eSingapore elenza umsebenzi wokuhlose ukuhlukanisa odadewethu abathathu abadala base-Iranian Siamese (abaneminyaka engama-29). Ukusebenza okuyingozi kakhulu kwaholela ekufeni kwalab 'odade ababili.
Ngo-2003, ukusebenza kweLea neTabea Block, isiJalimane iSiamese. Omunye wabo uzobulawa amahora ambalwa ngemuva kokuphela kokuhlinzwa.
U-Benjamin Carson wenza cishe imisebenzi ye-500 minyaka yonke ezinganeni ezibhekene nezinkinga ezihlukahlukene, ezingaba izinkinga zezinzwa, izicubu ...
Ungumbhali wabathengisi abathathu abanesihloko esithi "izandla ezinesipho", "Big Photo" ne "Cabanga Big" ngokulandelana. Ekhuluma nabafundi, uBanjamin Carson ubalulekise ukuthi bazuze ulwazi ngoba "uma kuningi okumele ukwazi, abantu abaningi bayakudinga futhi bakukhokhela ngokufanele". Futhi ukuze uthole lolu lwazi, kubalulekile ukuphendukela ezincwadini kunokuba kuthelevishini…
UBenjamin Carson ubheka kabi umphakathi wamanje waseMelika. Ngokusho kwakhe, lapho eseyingane, abazali bayinakekela ngempela inzalo yabo. Namuhla, isimo sengqondo esivumayo esivela kubazali ngokubhekela ezinganeni sibaqedelela futhi silimaze impumelelo yabo yezifundo. Ngaphezu kwalokho, uveza ukuthi, akubona bonke ababhekelele ukusebenza kwengqondo nodokotela bengqondo abathi namuhla kufanele "sivumele izingane ukuba zikhulume. Uyaqhubeka nokungenelela kwakhe emphakathini. Okumnikeza isikhathi esincane sokwenza ukungenelela kokuhlinzwa. Ubuye wenza ukungenelela okumangazayo kwezepolitiki ngesikhathi sokudla kwasekuseni kwesidlo sasekuseni noMongameli Obama ngoFebhuwari 7, 2013.
UMongameli uGeorges Bush wamnikeza ngonyaka ka-2008 i-Preseral Medal of Liberty, umhlobiso ophakeme kunayo yonke waseMelika owanikwa isakhamuzi. Futhi indaba yakhe ibuye ihunyushwe kwi-cinema ngaphansi kwesihloko esithi: Izandla zegolide.
Izandla Ezinzipho: Indaba yeBen Carson, i-watoto Edition
7,18€ kukhona kusitoki
10 okusha kusuka ku-5,61 €
I-6 isetshenzisiwe kusuka ku-6,37 €
Thenga i-7,18 €
kusukela ngoSepthemba 24, 2020 2:18
Inombolo Ingxenye 128515
Usuku lokukhulula 2014-08-26T00:00:01Z
Edition Uhlelo olubukeziwe
Inombolo yamakhasi isihlangane 176
Usuku lokushicilela 2014-08-26T00:00:01Z